မာတိကာ ~ မြန်မာ့သံစဉ်စာသားများ
ကလေးချော့သီချင်း။ ရေး - မသိ။ ဆို - ပြည်မောင်ကြီး။
ကလေးလို။ ရေး/ဆို - L လွန်းဝါ။ စီးရီး - အဆုံးမဲ့ ... မျှော်လင့်ချက်။
ကေဘိုထိုင်ဝါဒ။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ကောင်းကင်ထက်ဝယ်။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ကန့်သတ်ချက်။ ရေး - မြင့်မိုးအောင်။ ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း။ စီးရီး - ထာဝရ။
ကုန်ဈေးနှုန်း။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ကံကောင်းမယ့်အချစ်။ ရေး - ဆောင်းဦးလှိုင်။ ဆို - ဂရေဟမ်။ စီးရီး - လက်ဆောင်။
ကိုယ် ... မညာတော့ဘူး။ ရေး - R ခိုင်၊ ဆို - N ကိုင်ရာ။ စီးရီး - ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်။
ကိုယ့်အနားရှိစေချင်။ ရေး - R ခိုင်။ ဆို - R ဇာနည်။ စီးရီး - ၁၀ စက္ကန့် (၁)။
ကိုယ့်အမှား။ ဆို - တင်ဇာမော်။
ကြယ်တွေဆုံတဲ့ည။ ဆို - ထူးအိမ်သင်။ စီးရီး - ချစ်ခြင်းအားဖြင့်။
ကျွန်တော့်အဖေ။ ရေး - အငဲ။ ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း။ စီးရီး - ထာဝရ။
ကြွားလုံးမ။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ခိုင်စံပါယ်။ ရေး - ဂီတာသောင်း။ ဆို - ခင်ခင်တင့်။
ခေတ်ဆန်းချိန်။ ရေး/ဆို - ရွှေညာမောင်။
ချီတက်ကြစို့ တို့မြန်မာတပ်မတော်။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ချစ်တေးသံ။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ချစ်ပန်းပွင့်။ ရေး - အေဝမ်းဆရာညှာ။ ဆို - မေမြင့်။
ချစ်ဗျူဟာ။ ရေး - အေဝမ်းဆရာညှာ။ ဆို - မေရှင်။
ချစ်အဏုမြူ (၁)။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ချစ်အဏုမြူ (၂)။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ချစ်အဏ္ဏဝါ။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ခြောက်ပေါက်။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်။ ဆို - R ဇာနည်။ ရေး - R ခိုင်။ စီးရီး - ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်။
ဂုဏ်တော်ဖွင့်။ ရေး - အေဝမ်းဆရာညှာ။ ဆို - ပြည်လှဖေ။
ဂုဏ်ရည်မတူ။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ငါအော်ငိုလိုက်ချင်တယ်။ ရေး - မြင့်မြတ်။ ဆို - သားဇော်။ စီးရီး - ရော့ခ်ယူနိုက်တက် (၁)။
ငှက်မောင်နှံ။ ရေး - ရွှေတိုင်ညွန့်။ ဆို - ဘိလပ်ပြန်သန်း။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
စင်သီ။ ရေး - SNO ။ ဆို - L လွန်းဝါ။ စီးရီး - အဆုံးမဲ့ ... မျှော်လင့်ချက်။
စစ်ဆွေးသံ။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
စစ်အောင်နိုင်ရေး။ ရေး - အေဝမ်းဆရာညှာ။ ဆို - မသိ။
စွဲတယ်။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ဇာတ်ထုပ်ထဲက အတိုင်း။ ရေး/ဆို - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ စီးရီး - ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်။
ဇာတ်လမ်းတို။ ရေး - ရဲရင့်။ ဆို - Zero Hour စီးရီး - ရော့ခ်ယူနိုက်တက် (၁)။
ညာတာဝါဒ။ ရေး - ရွှေဂုန်ညွန့်။ ဆို - ခင်ခင်ရီ။
ညီ။ ရေး - ရာပြည့်။ ဆို - စိုးလွင်လွင်။ စီးရီး - သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ နှလုံးသား။
ညီလာခံ။ ရေး - လှည်းတန်းဦးလူကလေး။ ဆို - မကြည်အောင်။
တကယ့်ငြိမ်းချမ်းရေး။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
တစိမ့်စိမ့်ကြည့်။ ရေး - မင်းချစ်သူ၊ ဆို - ဖိုးကာ။
တို့တာဝန်။ ရေး - ရွှေဂုန်မောင်။ ဆို - လေဘာတီမြရင်။
တေမိယ။ ရေး - အေဝမ်းဆရာညှာ။ ဆို - မေရှင်။
တောထွက်ခန်း။ ရေး - ရွှေလမောင်။ ဆို - မသိန်းဟန်။ စီးရီ - ခေတ်ဟောင်းတေး
တစ်ချက်လောက်တော့ ငဲ့ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ရေး/ဆို - စိုးလွင်လွင်။ စီးရီး - ချစ်လူမိုက်။
တစ္ဆေ။ ရေး - မြင့်မိုးအောင်။ ဆို - မျိုးကြီး။ စီးရီး - အယ်လ်အမ်အင်န်။
တိတ်တိတ်ကလေးပဲ ချစ်သွားမယ်။ ရေး - ၀ိုင်ဝိုင်း၊ R ခိုင်။ ဆို - L ဆိုင်းဇီ။ စီးရီး - ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်။
တိမ်တိုက်လေးပြောပေးပါ။ ရေး - ရဲဝင့်ထူး။ ဆို - ရှင်ဖုန်း။ စီးရီး - ရင်ခုန်မိသူ။
ထီပေါက်မယ်။ ရေး - ရွှေဂုန်ညွန့်။ ဆို - မေမေဝင်း။
ထိုက်သုပန်။ ရေး - ဂီတာသောင်း။ ဆို - ခင်ခင်တင့်။
ဒါပါပဲ။ ရေး - ရွှေဂျော်ဂျော်။ ဆို - L လွန်းဝါ။ စီးရီး - အဆုံးမဲ့ ... မျှော်လင့်ချက်။
ဒီဃာယု။ ရေး - ရွှေဂုန်ညွန့်။ ဆို - ခင်ခင်ရီ။
ဒေါင်းမင်းပရိတ်။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
နေခြည်။ ရေး - မြင့်မြတ်။ ဆို - ဆလိုင်း။ စီးရီး - ရော့ခ်ယူနိုက်တက် (၁)။
နေ၀င်ချိန်။ ရေး - အယ်လ်ဖြူ။ ဆို - ဘိုဖြူ။ စီးရီး - ပြည့်စုံပါစေ။
နောက်ထပ်မရှိ။ ရေး - မြင့်မိုးအောင်။ ဆို - ထူးအိမ်သင်။ စီးရီး - တစ်နေ့စာအလွဲများ။
နှုတ်ဆက်မယ့်နွေ။ ရေး - ကိုနေ၀င်း။ ဆို - ထူးအိမ်သင်။ စီးရီး - တစ်နေ့စာအလွဲများ။
နယ်မြေသစ်များစွာ။ ရေး - မြင့်မိုးအောင်။ ဆို - အငဲ။ စီးရီး - အယ်လ်အမ်အင်န်။
နွေဦး။ ရေး - ဟန်ထူးလွင်။ ဆို - Big Bag ။ စီးရီး - ဗီလိန်။
နွေဦးကံ့ကော်။ ရေး - ကိုလေးလွင်။ ဆို - ထူးအိမ်သင်။ စီးရီး - တစ်နေ့စာအလွဲများ။
ပေါက္ကံရာဇာ။ ရေး - အေဝမ်းဆရာညှာ။ ဆို - လေဘာတီမြရင်။
ပင်နီအင်္ကျီ။ ရေး - ရွှေဂုန်ညွန့်။ ဆို - ခင်ခင်ရီ။
ပန်းစုံတဲ့တော။ ရေး - မသိ။ ဆို - ခင်မောင်ရင်။
ပန်းမခူးရ။ ရေး - မြင့်သိန်းညို။ ဆို - ရိန်မိုး။ စီးရီး - အမုန်းမရှိတဲ့ကမ္ဘာ။
ပြည်မှာဆောင်း။ ဆို - ခင်ဝမ်း။
ပြည့်စုံပါစေ။ ရေး - မောင်သစ်မင်း။ ဆို - ဘိုဖြူ။ စီးရီး - ပြည့်စုံပါစေ။
ပြတ်သားခဲ့။ ရေး - ရဲရင့်။ ဆို - Zero Hour ။ စီးရီး - ရော့ခ်ယူနိုက်တက် (၁)။
ပြန်ဆုံခြင်း။ ရေး - ဆောင်းဦးလှိုင်၊ အဲလက်စ်။ ဆို - အဲလက်စ်။ စီးရီး - စိတ်ကူးသက်သက်များ။
ပြန်လာခွင့်ပေးထားတယ်။ ရေး - R ခိုင်။ ဆို - ရှင်ဖုန်း။ စီးရီး - ၁၀ စက္ကန့် (၁)။
ပွဲနေပွဲထိုင်။ ရေး - အေဝမ်းဆရာညှာ။ ဆို - မသိ။
ဖန်ဆင်းခွင့်။ ရေး - ဇ၀ါ။ ဆို - ဇော်ပိုင်။ စီးရီး - အမောပြေ။
ဖန်နေဝန်း စစ်ချီသီချင်း။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ဖုန်းနေ့ဆက်လွမ်း။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ဖုန်းအောင့်တစ်ပြုံကြီး။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ငြိမ့်ငြိမ့်။ ရေး - ကိုလေးလွင်။ ဆို - ထူးအိမ်သင်၊ ဘိုဘို။ စီးရီး - တစ်နေ့စာအလွဲများ။
ဗမာတို့ရဲ့ တပ်မတော်။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ဗမာ့ဝါဒ။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ဗမာအစွမ်း။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ဗောဓိပင်နှင့်ရွှေပလ္လင်။ ရေး - ရွှေတိုင်ညွန့်။ ဆို - မကြည်အောင်။
ဘယ်တော့မှမရှုံး။ ရေး - ဆောင်းဦးလှိုင်။ ဆို - ဂရေဟမ်။ စီးရီး - လက်ဆောင်။
မခူးကြေး။ ရေး - ရွှေဂျော်ဂျော်။ ဆို - မို့မို့။ စီးရီး - ၁၀ စက္ကန့် (၁)။
မချစ်ဘဲမနေနိုင်။ ရေး - ရွှေတိုင်ညွန့်။ ဆို - မကြည်အောင်။
မစဉ်စားခြင်းသီချင်း။ ဆို - ဘိုဘို။ စီးရီး - ရောင်စုံချော့ကလက်လေးများ။
မဆွေးချင်ဘူး။ ရေး - ဖိုးကာ။ ဆို - ဇော်ပိုင်။ စီးရီး - အမောပြေ။
မဆန်းသော ဒိုင်ယာလော့ခ်။ ရေး - စံပီး။ ဆို - L လွန်းဝါ။ စီးရီး - အဆုံးမဲ့ ... မျှော်လင့်ချက်။
မငြိမ်းသောမီး။ ရေး - မောင်မောင်။ ဆို - ခင်မောင်တိုး။ စီးရီး - မဟာဆန်သူ။
မပြုစားနဲ့။ ရေး - ကေအေတီ။ ဆို - ရေဗက္က၀င်း။ စီးရီး - ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်။
မမေ့ပစ်နဲ့။ ရေး - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ ဆို - လေးဖြူ။ စီးရီး - ခဏလေးများ။
မယားဆိုး။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
မရေရာဘူး။ ရေး - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ ဆို - လေးဖြူ။ စီးရီး - ခဏလေးများ။
မလာပါနဲ့။ ရေး - ရယ်ဂျီ။ ဆို - မျိုးကြီး။ စီးရီး - နိစ္စဓူဝ။
မလွမ်းတဲ့ဆေး။ ရေး/ဆို - ဟန်ထူးလွင်။ စီးရီး - အားလုံးအတွက် PUNK!
မလွမ်းရဲသေးဘူး မောင်ရယ်။ ရေး - ဇ၀ါ။ ဆို - L ဆိုင်းဇီ။ စီးရီး - ၁၀ စက္ကန့် (၁)။
မဟာဇနက္က။ ရေး - အေဝမ်းဆရာညှာ။ ဆို - မရင်ရင်။
မဟာမြတ်မုနိ။ ရေး - အေဝမ်းဆရာညှာ။ ဆို - မေစိန်။
မဟောင်းတဲ့နေ့။ ရေး - ကေအေတီ။ ဆို - သအို။ စီးရီး - ၁၀ စက္ကန့် (၁)။
မာန။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
မာယာ။ ရေး - ၀င်းမင်းထွေး။ ဆို - လေးဖြူ။ စီးရီး - အယ်လ်အမ်အင်န်။
မိဘမေတ္တာ။ ရေး - ရွှေတိုင်ညွန့်။ ဆို - မကြည်အောင်။
မိသားစု။ ရေး - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ ဆို - L လွန်းဝါ။ စီးရီး - အဆုံးမဲ့ ... မျှော်လင့်ချက်။
မီးများ။ ရေး - ၀င်းမင်းထွေး။ ဆို - မျိုးကြီး။ စီးရီး - အယ်လ်အမ်အင်န်။
မိုးတစိမ့်စိမ့်။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
မိုးပုံပြင်။ ရေး - ယောဆက်။ ဆို - Foppy ။ စီးရီး - ရော့ခ်ယူနိုက်တက် (၂)။
မိုးပစ္စုန်။ ရေး - နန်းတော်ရှေ့ ဆရာတင်။ ဆို - မကြည်အောင်။
မိုးလင်းသွားတဲ့ညများ။ ဆို - R ဇာနည်။ စီးရီး - ငါ့ကိုချစ်တဲ့သူ။
မိုးသည်းထဲမှာ။ ရေး - ကေအေတီ။ ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း။ စီးရီး - လမင်းနဲ့ပင်လယ်။
မောဟစိတ်များ။ ရေး/ဆို - အီတိုး (Deed)။ စီးရီး - ဘာလာလာ။
မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး။ ရေး - အေဝမ်းဆရာညှာ။ ဆို - ပြည်ဘရှင်။
မင်းကျောင်းမတက်တဲ့နေ့။ ရေး - ဇ၀ါ။ ဆို - ဇော်ပိုင်။ စီးရီး - အမောပြေ။
မင်းခမ်းမင်းနား။ ရေး - နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်။ ဆို - မကြည်အောင်။
မင်းနဲ့ငါနဲ့။ ရေး/ဆို - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ စီးရီး - ဘာလာလာ။
မင်းပဲကိုယ်ချစ်တယ်။ ရေး/ဆို - L လွန်းဝါ။ စီးရီး - အဆုံးမဲ့ ... မျှော်လင့်ချက်။
မင်းမှမင်း။ ရေး - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ ဆို - လေးဖြူ။ စီးရီး - ခဏလေးများ။
မင်းမုန်းတဲ့လူ။ ရေး - ဇ၀ါ။ ဆို - အငဲ။ စီးရီး - ဇစ်မြစ်။
မင်းတစ်ယောက်တည်း။ ရေး - မောင်မောင်ဇော်လတ်၊ ဆို - ဆင်ပေါက်။
မင်းနဲ့ဝေးတော့။ ရေး - ဆောင်းဦးလှိုင်။ ဆို - ရှင်ဖုန်း။ စီးရီး - ရင်ခုန်မိသူ။
မင်းရဲ့ကို။ ရေး/ဆို - စိုးလွင်လွင်။ စီးရီး - ချစ်လူမိုက်။
မင်းရဲ့အဝေး။ ရေး - ဇ၀ါ။ ဆို - ဟန်ထွန်း။ စီးရီး - ရှိနေမယ်။
မင်းရှိနေတယ်။ ရေး - ဇော်တင်။ ဆို - စိုးလွင်လွင်။ စီးရီး - သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ နှလုံးသား။
မင်းအကြောင်းအိပ်မက်။ ရေး - ထူးအိမ်သင်။ ဆို - စည်သူလွင်။ စီးရီး - တို့မဝေးဘူး။
မင်းအတွက်။ ရေး - ညီညီသွင်၊ ရဲရဲ၊ဟိန်းဇော်။ ဆို - R ဇာနည်။ စီးရီး - ငါ့ကိုချစ်တဲ့သူ။
မင်းအတွက်ကဗျာလေး။ ရေး - အိပု။ ဆို - Cobra ။ စီးရီး -5x2= 1. Vol
မင်းအတွက်ဆိုရင်။ ရေး - R ခိုင်။ ဆို - ဇော်ပိုင်။ စီးရီး - ၁၀ စက္ကန့် (၁)။
မင်းအတွက်လက်ဆောင်။ ရေး - L လွန်းဝါ။ ဆို - ရှင်ဖုန်း။ စီးရီး - ရင်ခုန်မိသူ။
မင်းအတွက်သက်သက်။ ရေး - ဖိုးကာ။ ဆို - R ဇာနည်။ စီးရီး -5x2= 1. Vol
မောင်မနေတတ်ဘူး။ ရေး - စိုင်းခမ်းလိတ်။ ဆို - စိုင်းထီးဆိုင်။ စီးရီး - နွေရာသီ။
မောင့်သွေးစက်။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
မဇ္ဈိမ။ ဆို - ထူးအိမ်သင်။
မေတ္တာဂုဏ်။ ရေး - အေဝမ်းဆရာညှာ။ ဆို - ပြည်လှဖေ။
မယ်တင်။ ရေး - အရိုး။ ဆို - Big Bag ။ စီးရီး - ဗီလိန်၊ Big Show In The Bag
မယ်ဗမာ။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
မလ္လင်ရှင်းတမ်း။ ဆို - မကြည်အောင်။ ရေး - ရွှေတိုင်ညွန့်။
မျက်ရည်ယန္တရား။ ရေး - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ ဆို - လေးဖြူ။ စီးရီး - ကမ္ဘာသစ်တေး။
မြခွာညို။ ရေး - ရွှေဂုန်မောင်။ ဆို - မောင်မောင်စိုး။
မြေကြီးက မြေကြီးလိုနေတတ်ပါစေ။ ရေး/ဆို - စိုးလွင်လွင်။ စီးရီး - ချစ်လူမိုက်။
မြေနီလမ်း။ ရေး - အယ်လ်ဖြူ။ ဆို - ဘိုဖြူ။ စီးရီး - ပြည့်စုံပါစေ။
မြန်မာခေတ်။ ဆို - မကြည်အောင်။
မြန်မာလူထု သွေးစည်းရန်။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
မြန်မာအာဇာနည်။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
မြန်မာ့အဆွေ။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
မွေးရပ်မြေဆီ သွားရပြီ။ ရေး - ဖိုးရှမ်း။ ဆို - စိုးလွင်လွင်။ စီးရီး - ချစ်လူမိုက်။
မှန်တာပြောရင် သစ္စာ။ ရေး/ဆို - စိုးလွင်လွင်။ စီးရီး - ချစ်လူမိုက်။
ယဉ်ယဉ်လေးပဲ။ ရေး - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ ဆို - မျိုးကြီး။ စီးရီး - နိစ္စဓူဝ။
ရာဇဝင်ကြွေး။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
ရာသီတော်ဦး။ ဆို - မကြည်အောင်။ ရေး - နန်းတော်ရှေ့ဆရာတင်။
ရင်မှာ။ ရေး - အိုင်းဇက်။ ဆို - L လွန်းဝါ။ စီးရီး - အဆုံးမဲ့ ... မျှော်လင့်ချက်။
ရောင့်ရဲစို့။ ရေး - ဇ၀ါ။ ဆို - အငဲ။ စီးရီး - ဇစ်မြစ်။
ရည်ရွယ်သူသို့။ ရေး - အယ်လ်ဖြူ။ ဆို - ဘိုဖြူ။ စီးရီး - ပြည့်စုံပါစေ။
ရည်းစားဓားပြ။ ရေး - ရွှေဂုန်မောင်။ ဆို - မောင်မောင်စိုး + ခင်နှင်းရည်။
ရွှေကံ့ကော်။ ရေး - ရွှေဂုန်မောင်။ ဆို - မအေးမိ။
ရွှေနှင်းဆီ။ ရေး - ရွှေဂုန်မောင်။ ဆို - မအေးမိ။
ရွှေပုပ္ပား။ ရေး/ဆို - ရွှေညာမောင်။
ရွှေမောဓော။ ရေး - မသိ။ ဆို - ခင်မောင်ရင်။
ရွှေအင်းဝ။ ရေး - အေဝမ်းဆရာညှာ။ ဆို - မေရှင်။
လမင်းနဲ့ပင်လယ်။ ရေး - မြင့်မိုးအောင်။ ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း။ စီးရီး - လမင်းနဲ့ပင်လယ်။
လာခေါ်လှည့်။ ရေး - ဇော်ထင်။ ဆို - စိုးလွင်လွင်။ စီးရီး - ကျွန်တော်မသိတဲ့ ကျွန်တော်။
လူထုမိတ်ဆွေ။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
လောကကြိုးဝိုင်း။ ရေး - အယ်လ်ဖြူ၊ အယ်နောင်း။ ဆို - ဘိုဖြူ။ စီးရီး - ပြည့်စုံပါစေ။
လင်းလုပြီ။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
လတ်တီး။ ရေး - စိုင်းဝီရဌ်။ ဆို - ဘိုဖြူ။ စီးရီး - ပြည့်စုံပါစေ။
လွတ်လပ်ရေးပဒေသာ။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
လွန်ဆန်ဖို့ မအောင်မြင်ဘူး။ ရေး - အငဲ။ ဆို - သအို။ စီးရီး - ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်။
လွမ်းစရာလေးတွေ။ ရေး - ဆောင်းဦးလှိုင်။ ဆို - ရှင်ဖုန်း။ စီးရီး - ရင်ခုန်မိသူ။
လွမ်းနေတုန်း အိပ်မက်။ ရေး - ရွှေဂျော်ဂျော်။ ဆို - ချစ်သုဝေ။ စီးရီး - ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်။
လွမ်းနေပြီ။ ရေး - ညီညီအောင်။ ဆို - မြင့်မြတ်။ စီးရီး - ရော့ခ်ယူနိုက်တက် (၁)။
လွမ်းနေဦးမယ်။ ရေး - ကေအေတီ။ ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း။ စီးရီး - လမင်းနဲ့ပင်လယ်။
ဝိစိတြ ရေး - ရွှေတိုင်ညွန့်။ ဆို - မကြည်အောင်။
ဝေ့လယ်လယ်။ ရေး - ဂီတာသောင်း။ ဆို - ခင်ခင်တင့်၊ ဂီတာသောင်း။
ဝေး။ ရေး - လင်းလင်း။ ဆို - မျိုးကြီး။ စီးရီး - နိစ္စဓူဝ။
ဝေးခဲ့သူ။ ရေး/ဆို - ရဲလေး။ စီးရီး - ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်။
ဝေးနေတဲ့သီချင်း။ ဆို - R ဇာနည်။
ဝေးရမှာ တွေးကြောက်နေသူ။ ရေး - R ခိုင်။ ဆို - ကြိုးကြာ။ စီးရီး - ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်။
ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း။ ရေး - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ ဆို - လေးဖြူ။ စီးရီး - ခဏလေးများ။
သားကြီး။ ရေး - အယ်လ်ဖြူ။ ဆို - ဘိုဖြူ။ စီးရီး - ပြည့်စုံပါစေ။
သီရိဂေဟာ။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
သုဝဏ္ဏသျှံ။ ရေး - အေဝမ်းဆရာညှာ။ ဆို - ပြည်လှဖေ။
သူမသိလည်း။ ရေး - ဇ၀ါ၊ ဆို - စင်ဒီ။ စီးရီး - ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်။
သေသည့်တိုင်အောင် ချစ်နေမယ်။ ရေး - စောနဲတာ။ ဆို - ဂရေဟမ်။ စီးရီး - လက်ဆောင်။
သောကဘုံ။ ရေး - လင်းလင်း၊ ဆို - The JUNGLE ။ စီးရီး - ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်။
သင်ခန်းစာ ရေး - မြင့်မိုးအောင်။ ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း။ စီးရီး - လမင်းနဲ့ပင်လယ်။
အချစ်ကိုဦးစားပေးခဲ့သူ။ ရေး - စိုင်းခမ်းလိတ်။ ဆို - စိုင်းထီးဆိုင်။ စီးရီး - နွေရာသီ။
အချစ်စစ်တစ်ခု။ ရေး - မြင့်မိုးအောင်။ ဆို - ဇော်ပိုင်။ စီးရီး - အမောပြေ။
အချစ်ဆိုတာ။ ရေး - ဆောင်းဦးလှိုင်။ ဆို - ဆောင်းဦးလှိုင်၊ စည်သူလွင်။ စီးရီး - ရိုမန်တစ်ရော့ခ်။
အချစ်ဦးပုံပြင်။ ရေး/ဆို - အငဲ။ စီးရီး - ဇစ်မြစ်။
အချစ်အက္ခရာ။ ရေး - မြင့်မိုးအောင်။ ဆို - ၀ိုင်ဝိုင်း။ စီးရီး - ထာဝရ။
အချိန်မီသာ ပြင်ဆင်ခွင့် မရှိခဲ့ရင်။ ရေး - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ ဆို - မျိုးကြီး။ စီးရီး - နိစ္စဓူဝ။
အချိန်တိုင်းမင်းအတွက်။ ရေး/ဆို - L လွန်းဝါ။ စီးရီး - အဆုံးမဲ့ ... မျှော်လင့်ချက်။
အဆုံးမဲ့ ... မျှော်လင့်ချက်။ ရေး/ဆို - L လွန်းဝါ။ စီးရီး - အဆုံးမဲ့ ... မျှော်လင့်ချက်။
အဆွေ သင်ဘယ်လိုစိတ်ကူးတယ်။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
အတောင်ပံတွေ။ ရေး/ဆို - မျိုးကျော့မြိုင်။ စီးရီး - မြတ်နိုးခွင့် (၂)။
အတိတ်ရင်ခွင်။ ရေး - လင်းလင်း၊ ဆို - ဟန်ထွန်း။ စီးရီး - ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်။
အနန္တငါးဖြာ။ ရေး - အေဝမ်းဆရာညှာ။ ဆို - မေစိန်။
အဖြူသက်သက်။ ရေး - V နိုထွန်း။ ဆို - L လွန်းဝါ။ စီးရီး - အဆုံးမဲ့ ... မျှော်လင့်ချက်။
အမေ။ ရေး - ရာပြည့်။ ဆို - စိုးလွင်လွင်။ စီးရီး - သူရဲကောင်းတို့ရဲ့ နှလုံးသား။
အမေ့သား။ ရေး - ရွှေလမောင်။ ဆို - မသိန်းဟန်။ စီးရီး - ခေတ်ဟောင်းတေး
အမောက်။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
အမျိုးသားစစ်ချီ (၂)။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
အရေးတော်ပုံ။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
အရင်အတိုင်း။ ရေး - D ဦး။ ဆို - ရှင်ဖုန်း။ စီးရီး - ရင်ခုန်မိသူ။
အလင်းနှစ်များ။ ရေး - မြင့်မိုးအောင်။ ဆို - အငဲ။ စီးရီး - အယ်လ်အမ်အင်န်။
အလွမ်းမိုင်တိုင် ၁၅၀၀။ ရေး - အယ်လ်ဖြူ။ ဆို - ဘိုဖြူ။ စီးရီး - ပြည့်စုံပါစေ။
အလှူတော်မင်္ဂလာ။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
အဝါရောင်ကိုက်ခဲမှု။ ရေး - ရွှေဂျော်ဂျော်။ ဆို - လေးဖြူ။ စီးရီး - အယ်လ်အမ်အင်န်။
အဝေးကြီး။ ရေး/ဆို - မျိုးကျော့မြိုင်။
အာဏာရှင် (၁)။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
အာဏာရှင် (၂)။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
အာရှမယ်။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
အာရှလူငယ် (၂)။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
အာရှလူငယ် (၄)။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
အောင်သပြေ။ ရေး - မသိ။ ဆို - မသိ။
အိပ်မက်ဆောင်းည။ ရေး - မောင်မောင်ဇော်လတ်။ ဆို - ဘိုဖြူ။ စီးရီး - ပြည့်စုံပါစေ။
အိမ်။ ရေး - မြင့်မိုးအောင်။ ဆို - ဟန်ထွန်း၊ တင်ဇာမော်။ စီးရီး - ရှိနေမယ်။
အိမ်ပြန်ချိန်။ ရေး - ရွှေဂျော်ဂျော်။
စီးရီး - ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်။
ဦးနုစကားပုံ။ ရေး - ရွှေတိုင်ညွန့်။ ဆို - မကြည်အောင်။
April နတ်သမီး။ ရေး - အောင်ဇော်လတ်။ ဆို - L လွန်းဝါ။ စီးရီး - အဆုံးမဲ့ ... မျှော်လင့်ချက်။